Wakiil Ka Noqosho Si Sharci Ah | LawHelp Minnesota
Wakiil Ka Noqosho Si Sharci Ah
Powers of Attorney (PDF)452.75 KB
Muxuu yahay Wakiil ka noqosho sharci ah?
Wakiil ka noqosho sharci waa ogolaansho qoraal ah oo qof loo siiyay in uu mas’uul ka noqdo hantidaada ama lacagtaada, sidii aad adigu u dooneyso. Dukumeentiga wakiil ka noqoshada sharciga ah, qofka awooda wakiilnimada bixinaya waxaa loo yaqaan “Wakiishe (waa qofka awooda bixiyay). Qofka qaadaya mas’uuliyadda waxaa loo yaqaan “ Wakiil”. Qofkaasi ma aha In uu yahay garyaqaan.
Yaan ka dhigtaa qof ii noqda wakiilka sharciga ah?
Qof kasta oo leh karti iyo awood, mas’uuliyad qaadi kara oo ka weyn 18 sanno waad wakiilkan kartaa. Waxaa ka mid noqon kara xubnaha qoyska. Dada badan waxay doortaan qofka u dhaxa, ama ubadkooda. Waxaa muhiim ah in aad doorato qof aad aamini karto. Xusuusnoow in ay maamulayaan bangigaaga, ama hantidaada ma guurtada ah.
Waxaad qabsan kartaa wax ka badan hal qof oo wakiil gaar ah kuu noqda. Laakiin Xasuusnow, qof kasta magacaaga ayuu wax ku samayn karaa asagoo aan qofka kale wax ogolaansho ah weydiisanayn, haddii aadan adigu u qorin in mas’uuliyadiisu ay ka duwan tahay kuwa kale.
Waxaad kaloo magacaabi kartaa “ xil la wareege gaar ah”. Kani waa qof qaadaya mas’uuliyadda haddii wakiilku uu maqan yahay ama mar dambe uusan mas’uuliyad qabaneyn.
Awood intee le’eg ayuu haystaa wakiilka gaarka ah?
Haddii wakiilka gaarka ah uu magacaaga ku sameeyo talaabo sharci ah, waxay ka dhigan tahay in aad adgu samaysay oo kale. Wakiil ka noqoshada sharciga ah ma diidayso in weli adiga laftaadu aad is matasho, laakiin wakiilka gaarka ahi waa ku matali karaa adiga.
Wakiilka gaarka ahi ma aha qofka mas’uul kaa ah. Laguguma khasbi karo in aad dhaqaaqdo, ama in aad samayso wax aadan ogolayn. Ma luminaysid xuquuqdaada in aad maamusho hantidaada ma guurtada ah iyo lacagtaada. Ma luminaysid xuquuqdaada ah in aad go’aan ka gaartid noloshaada, sida meesha aad rabto in aad ku noolaato, ama sida aad watigaaga u qaadatid. Waad la noqon kartaa markaad doonto awoodda wakiil ka noqoshada sharciga ah.
Inta badan waxaad siisaa awoodda wakiil ka noqoshada sharciga ah in qof kale uu kuu saxiixo waraaqaha la xiriira guriga iyo arrimaha lacagta. Awoodda waxaa lagu koobi karaa wax yaabo gaar ah, sida gaddida hantida ma guurtada ah, ama waa la balaarin karaa, sida hantida maguurtada ah oo dhan, iyo arrimaha lacagta. Waxay ku xirran tahay waxa aad ku qorto foomka wakiil ka noqoshada sharciga ah.
Maxay kaloo tahay in uu sameeyo wakiilka gaarka ah?
Wakiilka gaarka ah wuxuu mas’uul ka yahay in uu hayo diiwaan gelinta wax isweydaarsiga uu adiga kuu samaynayo. Tan waxaa loo yaqaan “ xisaabin”. Waydii in aad aragto diiwaankaas si joogta ah. Xitaa haddii aad aaminsantahay qofka, in aad hesho xisaabaadka si joogta ah bishiiba ama 3dii biloodba hal mar waa ra’yi wanaagsan. Waxaa kaloo ra’yi wanaagsan ah in adiga iyo qof kale ee qoyska ka mid ah in loo soo diro xisaabaadka si ay u caawimaan ul ana socdaan waxa jira.
Sharci ahaan, wakiilka gaarka ahi waa in uu wax kasta u sameeyaa sida ugu wanaagsan ee ay adiga dantaadu ku jirto.
Sidee u sameeyaa wakiil ka noqosho sharci ah?
Wakiil ka noqoshada sharciga ahi waa in ay tahay qoraal, leedahay taariikh, adigu aad ku hor saxiixday nootaayo dadweyne. Hadii aad rabtid awood siintaasi in ay ku dhamaato waqti go’an, ku qor tariikhda, maalinta iyo bisha ay ku dhamaanayso.
Muhiim: Foomka wakiil ka noqoshada sharciga ah wuxuu dhaqan galayaa marka aad saxiixdo oo la nooteeyo. Waxay awood siinaysaa wakiilka gaarka ah isla markiiba – ma aha oo keliya in aad xanuunsatay ama aadan go’aan isu gaari karin.
Foomka wakiil ka noqoshada waxaa wax laga bedelay Janaayo 2014. Foomka hadda jira wuxuu leeyahay tilmaan bixin badan iyo digniino ku saabsan kaalinta iyo mas’uuliyadda wakiilka gaarka ah.
Haddii aad horey u samaysay wakiil ka noosho sharci ah weli waa wanaagsanyahay. Uma baahnid in aad mid kale samaysid. Haddii aad hadda samaynaysid foomka wakiil ka noqosho sharci ah, isticmaal foomka halkaan ku lifaaqan. Hubi in aad akhriday “ Ogaysiin Muhiim ah ee qofka asliga ah”oo ku qoran bogga ka dambeeya foomka. Waa in aad saxiixdaa si aad u muujiso in aad akhriday waana in aad u haysaa sidii qayb ka mid ah foomka.
Aman O, create a Power of Attorney online ( Ka Diyaarso wakiil ka noqoshada sharciga ah barta internetka) halka www.lawhelpmn.org/forms.
Ka fiiri hoos “Daryeelka Caafimaadka iyo Wakiil ka noqoshada Sharciga ah (Health Care and Power of Attorney”
Guji halka “Wakiil ka Noqoshada Sharciga ah (Power of Attorney)”
Tani waa su’aalo talaaba talaabo ah oo ku gaarsiinaya in aad daabacatid foomkii oo dhamaystiran marka aad ka wada jawaabtid su’aalaha.
Qok kasta ma samayn karaa wakiil ka noqosho sharci?
Waa in maskaxdaadu leedahay karti iyo awood, oo aad go’aamada keligaa qaadan kartid. Maskax leh karti iyo awood waxay la micne tahay “ maskax fiyoow”. Dadka qaba cudurka ilowshaha ama curyaanimo kale waa laga yaabaa in ay maskax ahaan fiyow yihiin xitaa iyaga oo qaba cudurkaas. Haddii ay su’aal ka jirto fiyoobaanta maskaxda, waxaad la hadli kartaa dakhtarkaaga ama bixiye daryeel caafimaad ka hor inta aadan saxiixin foomka wakiil ka noqoshada sharciga ah.
Haddii qofka uusan maskax ahaan fiyoobayn, ama uu maskax ahaan dhimanyahay, ma samayn karo wax ah wakiil ka noqosho sharci ah. Marka xaaladaani jirto, waxaa loo baahanyahay in la sameeyo mas’uul ka noqosho ama qof sharci ahaan loo siiyay in uu maamulo hantida.
Wixii maclummad dheeraad ah ka fiiri xogta urursan, Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Dhaqaalaha.
Muxuu yahay wakiil ka noqosho mudada ku xiran?
“Mudada ku xiran” micneheedu waa mid dhamaanaya. Inta badan, haddii aad noqoto aan miyirkuusu fayoobeyn, wakiil ka noqosho sharciha ah ma aha dhaqangal. Laakiin waad qori kartaa haddii aad rabto in awoodaas ay sii socoto haddii aad noqoto qof maskaxda aan ka fiyoobayn. Markaas waxaa la oran kara waa wakiil ka noqosho sharci oo waaraysa. Haddii aad ku sheegtay wakiilashadda “ in awooda wakiil ka noqoshada sharci waxba uma dhimayso awoodda qof wakiilka ah haddii aanan go’aan isu gaari karin” markaas waxay noqonaysaa wakiil ka noqosho joogta ah.
Foomka halkaan ku xirran, marka aad calaamadiso “ Waakiil ka noqoshada sharcgia ahi waxay jiraysaa xitaa haddii aan anigu noqdo qof go’aan isu gaari karin oo aan lahayn karti iyo awood” waxay ka dhigaysaa wakiil ka noqoqshada mid rasmi ah.
Haddii aad noqoto qof maskaxda ka jiran, wakiil ka noqoshada sharciga ah waxaa joojin oo kaliya wakiil ay maxkamaddu u magacowday oo sharci ahaan awood loo siiyey maamulka hantida.
Ma u baahanahay garyaqaan iga caawima in aan sameeyo wakiil ka noqosho sharci ah?
Maya. Laakiin waa wax wanaagsan in aad isticmaasho garyaqaan. Maxkamadu waxay fiirinaysaa waxa ay sameeyaan wakiilada cidda maxkamadu u magacowday in ay mas’uul ka noqdaan oo maamulaan hantida qofka, laakiin ma fiiriyaan waxa uu sameeynayo wakiilka gaarka ah. Wakiilka gaarka ah wuu kaa faa’idaysan karaa. Garyaqaanku wuxuu kaa caawimi karaa in lagu qoro waxyaabaha aad rabto warqadaha wakiil ka noqoshada sharciga ah oo xadidaya waxa uu samayn karo wakiilka gaarka ah ama ka dhigaysa in uu kula wadaago waxa uu ku samaynayo guriga/hantida ma guurtada ah iyo lacagta.
Sidee u shaqeeyaa wakiilka sharciga ah yaana la siinayaa koobiyada?
Labadaba, wakiilkaaga gaarka iyo qofka la wadaaga wakiilashada waa in ay haystaan koobi ka mid ah wakiilashada. Haddii aad awood u siinayso ah in uu iibiyo dhul, waa in aad nuqulka asliga ah oo saxiixan siisaa xafiiska diiwaangelinta degmada. Haddii awoodu ay la xiriirto lacag, koobi sii bangiga.
Marka wakiilka gaarka ah uu adiga ku matalayo, waxay wax ku saxiixaan magacooda, markaas ka dib waxay qoraan:
(Saxiixooda) La wadaagga wakiilka ee (Magacaaga).
Ma joojin karaa wakiil ka noqoshada sharciga?
Haa. Qof leh karti iyo awood waa baabi’in karaa wakiil ka noqoshada sharciga ah waqti kasta. Waa in aad qoraal ku sheegtaa in aad baabi’isay wakiil ka noqoshada sharciga ah, aad saxiixdaa, ku qortaa taariikhdataariikh nootaayada horteeda. Waa in aad koobi u dirtaa wakiilka, qof kasta, xafiis kasta iyo bangiga wakiilkaaga arrimahaaga kala xiriiray. Haddii aadan dirin koobiyada baabi’inta, shirkaduhu ma ogaanayaan, wakiilka gaarka ahna sidiisii ayuu howsha u wadanayaa.
Waa in aad adigu soo ceshataa wakiil ka noqoshada sharciga ah nuqulkii asliga ahaa.
Halkaan waxaa ku lifaaqan foomka baabi’inta wakiil ka noqoshada sharciga ah.
Ama waxaad kartaa create a Revocation of Power of Attorney online (Si xiriisan u samay Baabi’inta Wakiil ka Noqoshada Sharciga ah) halkan www.lawhelpmn.org/forms.
Guji halka “ Daryeelka Caafimaad iyo Awoodaha kale (Health Care and Other Powers)”
Guji halka “ Baabi’inta Wakiil ka Noqoshada Sharciga ah (Power of Attorney Revocation)”
Tani waa su’aalo talaaba talaabo ah oo ku gaarsiinaya in aad daabacato foomkii oo dhamaystiran marka aad ka wada jawaabtid su’aalaha.
Fiiro gaar ah: Wakiil ka Noqoshada Sharciga ah waxay dhamaataa marka uu geeriyoodo wakiilkaaga . Haddii aad siiso wakiil ka noqoshada sharciga ah qofka aad isu dhaxdaan, waxay dhamaataa marka qofkii uu bilaabo is furitaanka, kala noolaanshaha, ama dacwad baabi’inta isu dhixidda.